04/27/12 ~ ကြယ်ပွင့်မြို့တော်
ကျွန်တော် ၏ Blogger ဆိုဒ်ကလေးပြုပြင်ဆဲကာလဖြစ်ပါသောကြောင့် လိုအပ်တာများ လုပ်မရသောအရာများ ရှိပါက sl.northerstar@gmail.com ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်...ခင်ဗျာ....
10:59 AM ကြယ်လေး No comments
ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာပြည်ကနေ youtube ဆိုက်ကို ကြည့်ခွင့်မပေးထားပါဘူး . ပိတ်ထားပါတယ် . မနေ့က ညီလေးတစ်ယောက် မြန်မာပြည်ကနေ youtube movies တွေကို ဘယ်လိုကြည့်ရင် အဆင်အပြေဆုံး လဲလို့မေးလာပါတယ် . freedom လဲမသုံးချင်ပါဘူးလို့ ပြောတယ် . ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခုပေးလိုက်တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်ကလေးကို သွားစေချင်ပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ် . အခုပေးတဲ့ ဆိုက်ကိုတော့ မြန်မာပြည်က ပိတ်မထားရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ် .. Msn, AIM, Yahoo နှင့် Gtalk တို့ကိုလဲ အဆင်ပြေပြေပဲ ၀င် Chat လို့ရပါသေးတယ် .. ကဲ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ၀ဘ်ဆိုက်လိပ်စာနာမည်က https://polysolve.com ပါ .. အဆင်ပြေမယ်လို့လဲမျှော်လင့်ပါတယ် . ပြီးတော့ အခုပို့စ်နှင့်အတူ ကျော်ဖို့၊ ခွဖို့အတွက် ၀ဘ်ဆိုက်လိပ်စာတွေလဲ ရေးပေးလိုက်ပါတယ် . သိသူများရှိသလို မသိသူများလဲရှိပါတယ် . အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ . ၀ဘ်ဆိုက် အသစ်တွေကိုပါ စာရင်းလုပ်ပြီး ထည့်ပေးထားပါတယ် .. Blog ရေးချင်သူများလဲ စမ်းသပ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ် . .
မကြည့်စေချင်တဲ့ website တွေကို ဘယ်လို ပိတ်ထားမလဲ
10:56 AM ကြယ်လေး No comments
ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးတည်းကို ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများ စုပြီးတော့ သုံးနေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိကွန်ပျူတာကို မိမိမဟုတ်သော တစ်ခြား တစ်စုံတစ်ယောက်အား ပေးသုံးတာတွင် မိမိ မသုံးစေချင် မဖွင့်စေချင်သည့် ၀ဘ်ဆိုက်များကို ပိတ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုပေးလိုက်တဲ့ program နှင့် ပိတ်ထားလို့ရပါတယ် . ကျွန်တော်တို့ အဓိက ပိတ်ချင်တာက Porn ဆိုက်တွေကိုပါ . မိမိညီငယ် ညီမငယ်များ အရွယ်မရောက်သေးဘဲ ဒီလို ဆိုက်တွေကို မကြည့်စေချင်လို့
10:50 AM ကြယ်လေး No comments
SpeedConnect Internet Accelerator v.8 - With Serial + Crack
10:48 AM ကြယ်လေး No comments
ဒီswftwares လေးက ကျွန်တော်ထက်ဆရာ့ဆရာကျတဲ့ အကိုညီနေမင်းဆီမှာ ကူးယူတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ....
ဒီ software လေးကတော့ web page, email တွေကို ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီးတော့ မြန်စေတဲ့အပြင် Download လုပ်တာတို့ online games ဆော့ တာတို့ကိုလဲ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပြေနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်. အထဲမှာ setting ကိုတော့ ကိုသုံးတဲ့ connection အမျိုးအစားကို ရွေးပေး ရမှာဖြစ်ပါတယ်. တစ်ခြား net speeder လိုမျိုး CPU ကို အတင်းစွတ်ပြီး speed ခိုင်းတာမျိုး
USB to Ethernet Connector 4.0.0.574
10:43 AM ကြယ်လေး No comments
ဒီကောင်လေးကတော့ USB to Ethernet Connector လေးဖြစ်ပါတယ် .. LAN/WAN/VLAN/VPN/Internet တို့ကို USB Port လေးကို အသုံးပြုပြီး Sharing ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ Sever Computer ပေါ်မှတစ်ဆင့် shared remote ports လေးတပ်ဆင်ပြီး Client Computer တွေကို တိုက်ရိုက် Connect လုပ်ပေးနိုင်သလို တစ်ခြား Function တွေကိုလည်း အသုံးပြု နိုင်ပြီး .. ဒီကောင်လေးကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ် ဆိုတာကိုတော့ သူရဲ့ ဆိုဒ်မှာ ရေးပေးထားပါတယ် .. လေ့လာချင်တဲ့ သူတွေကတော့ ဒီလင့်လေး ကနေသွားလိုက်ပါ .. သုံးကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့လင့်လေး ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
gmail ကို offline beckup ဘယ်လိုသုံးမလဲ
7:18 AM ကြယ်လေး No comments
ဒါကတော့ gmail ကို offline beckup လုပ်ပြီးသုံးချင်သူတွေအတွက်ပါ အောက်က ဆော့လ်ဝဲကို အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ ပြီးရင် install အရင်လုပ်ထားလိုက်ပါ ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုဒါကိုတော့ အောက်ကအတိုင်းလိုက်လုပ်လိုက်ပါ။
(၁) gmail ကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါ
(၂) Settings ကိုကလစ်လိုက်ပါ
(၃) Offline ကို ကလစ်လိုက်ပါ
G-Talk Icon လန်းလန်းလေးသုံးချင်ရင်
3:59 AM ကြယ်လေး No comments
သုံးဖူးတဲ့သူတွေ ၊ရှိပြီးသားလူတွေအတွက်တော့ အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး မနေ့ကမှစက်မှာ
G-Talk အဆင်သင့် Run ပြီးသားမရှိတာနဲ့ စက်ထဲမှာအဆင်သင့် သုံးလို့ရတာလေး ပုံမှန်သုံးနေကျG-talk
green လေးသုံးမလို့ ကြည့်လိုက်တာ ဒီကောင်လေးကိုတွေ့တာနဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်တာ သုံးရတာလဲအဆင်ပြေ
သလို အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်လေးတွေပဲ ကြိုက်တော့ကျွန်တော့် အတွက်တော့အဆင်ပြေ
လို့ကျွန်တော်နဲ့အကြိုက်တူတဲ့ သူတွေရှိရင်လဲ သုံးလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ..ကျွန်တော်ကြိုက်တာက
တော့ Task Bar ထဲထည့်ထားလိုက်ရင် လူပုံလေးနဲ့ဆိုတော့ ကြည့်လို့လှသလို ပြီးရင်မသုံးဘူးတဲ့ဆိုရင် G-talk
မှန်းတောင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူး..ကျွန်တော်နဲ့ အကြိုက်ချင်းတူရင်တော့ အောက်မှာအဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေသာ
ကျွန်တော် ၏ Blogger ဆိုဒ်ကလေးကိုရောက်လာသူအပေါင်းအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့၏ပါစေလိုဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ် လိုအပ်ချက်များ နှင့်အကူအညီများရှိပါကwhiteheartcity.blogger@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်အကြံပေး မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
ကြယ်လေး whiteheartcity.blogger@gmail.com sl.northernstar@gmail.com sorkyibel@gmail.com
ကျွန်တော် ၏ Blogger ဆိုဒ်ကလေးတွင် မိမိတို့၏Flash Soungများကိုတင်ပြလိုပါ အထက်ဖော်ပြအကောက်များ ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ...
ပင်တဂွန် email စနစ်ထဲ hacker ၀င်နှောက်ယှက် အမေရိကန် စစ်ဋ္ဌာနချုပ် ပင်တဂွန်၏ လုံခြုံရေး အဆင့်သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသေ...
Connection ကျနေတဲ့အချိန် Gtalk Gmail အလျင်မြန်ဆုံးအသုံးပြုလိုသူများအတွက်ပါ။
Connection တွေ မကောင်းတဲ့ ကြားက ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေ ကို သတိရနေမိတာတော့ အမှန်ပါပဲဗျာ။ကဲ ဒီတစ်ခါလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ Connection တွေ ကျနေ...
အစကတည်းက..........ဝေးကွာပြီးသားပါ..... နှလုံးသားထဲမှာ..........မင်းပုံရိပ်ကိုထည့်ပြီး..... မိုင်းထောင်ပေါင်းများစွားကို......တွန်းလှန်နေတဲ...
ok virus cleaner version4(latest version)
ဒါကတော့ မြန်မာပြည်က ထုတ်တဲ့ ok virus cleaner version4နောက်ဆုံးထွက် အခွေပါ. အထဲမှာ virus သတ်ပုံသတ်နည်းများနှင့် တစ်ခြားသော အသုံးဝင်တဲ့ vi...
About Virus Value Value တစ်ခုမှာရှိတဲ့ Data တစ်ခုကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ Data type အမျိုးအစား (၆)မျိုးအနက်က တစ်ခုခုနဲ့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်...
ရန်ကုန် ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်တခုမှာ နေတဲ့ အသက် ၅၀ ကျော်အရွယ် ဦးလေးကြည်လို့ ခေါ်တဲ့ ဦးကြည်နဲ့ အသက် ၃၀ လောက် ရှိတဲ့ သက်နိုင် ဆိုတဲ့ တူအရီး နှ...
Gtalk Custom Massage အလန်းများစုစည်းမှု (3)
Massage (1) ချစ်(ခြစ်)တာက ခဲတံ။ ခံစားတာက ပန်းကန်ပြား။ ကြေကွဲတာက ကြက်ဥ။ နာကျင်တာက ဓာတ်လိုက်လို့။ ရင်နာတာက မှောက်အိပ်လို့။ ကိုရင် တွေခုန...
ထူးထူးခြားခြား ကွန်ပျူတာမှာ မျက်နှာပြပြီ login ၀င်လိုရပြီ
အနော်တို့..ကွန်ပျူတာများမှာ ပုံမှန် ဆို Log in ၀င်ရင် User name & Password ရိုက်ပြီးဝင်ရပါတယ် အခုတော့ Web Cam မှာ ကိုယ့်မျက်နှ...
Flash Soung (13)
SpeedConnect Internet Accelerator v.8 - With Seria...
facebook ကနေ ကွန်မန့်ပေးခဲ့လိုရတယ်နော်....
ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော တချို့သောစာစုများကို မူရင်းရေးသားသူများ၊ ဆင့်ပွားတင်ပြထားသူများအား မူရင်းစာရေးသူ၏ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဖော်ပြထားခြင်းအတွက် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရန် ကျွန်တော်မှအနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါသည်...
ပြက္ခဒိန် နှင့် အချိန်နာရီ
ကျွန်တော် ၏ Blogger ဆိုဒ်ကလေးကို
ကိုယ် စိတ်နှလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ပါစေလို
ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ဒါန လေးပြုသွားပါဦး
ကြွက်ကလေးကို အစာကျွေးပြီ ပတ်ပြေးခိုင်းမယ်
မင်းကို ငါတို့ လက်ကမ်းလို့ကြိုမယ်........။
Port = ၃၁၂၈
အသစ်တင်တိုင်းပို့ပေးပါမယ် အီးမေးလ်လိပ်စာလေးထားခဲ့ပေးပါပြီလျှင့် Enter ခေါက်လိုက်ပါ...
ရောက်လာရင် ခြေရာလေးတွေထားခဲ့ ဒီအတိုင်းပြန်မသွားနဲ့...
ကိုယ်မြို့မှ ရာသီဥတု အခြေအနေလေးကြည့်မယ်
★★★ကြယ်လေး★★★. Powered by Blogger.
Copyright © 2011 ကြယ်ပွင့်မြို့တော် | Powered by Blogger